Booliska oo muujiyay qiimaha Soomaalida Sweden - iftineducation.com
iftineducation.com – Booliska Sweden ayaa shaaciyay in ay xireen baaritaankii lagu haayay xilbaanada Amineh Kakabaveh ee faafisay filim daacad ku ah Soomaalida. Sababta ay boolisku u xireen dacwadaan ayaa ah mid runtii aad looga caroodo isla markaana muujinaysa qiimaha ay ku fadhiyaan Soomaalida ku nool Sweden.
Dambi-baaraha qaabilsanaa dacwadaan ayaa sheegay in boolisku ay internet-ka waayeen muuqaalkii dacaayada ahaa oo horay loogu daabacay Youtube. Filimkaasi ayaa u muuqda mid laga tiray Youtube balse in boolisku ku sheegaan in ay waayeen filimka oo sidaasi ay dacwada u xiraan ayaa ah mid aan la aqbali karin isla markaana aflagaado ku ah Soomaalida.
Haddii ay doonayaan waxay xiriir la samayn karaan Youtube oo dib u soo celinta karta muuqaalka balse hadalka booliska ayaa muujinaya in dacwada Soomaalidu aysan qiimo badan ku fadhin, isla markaana aysan soomaalidu ahayn dad sidaa muhiim u ah.
Booliska ayaa sheegay in muddo dheer ay qaadanayso in Youtube ay soo celiso muuqaalka oo taasi ay tahay waqti dhumis. Waxay intaasi ku dareen in haddii qof kale uu muuqaalka soo arko in booliska u soo bandhigo oo dib dacwada dib loo furi doono.